Marketing marketing 5 no mitarika ny marika ilanao hampiasa | Martech Zone
Asabotsy Jolay 25, 2015 Asabotsy Jolay 25, 2015 Douglas Karr
Cruises olo-malaza nanangana tranokala tamin'ny volana martsa 2015 izay nahatonga fiakarana 12% amin'ny famandrihana avy amin'ny fitaovana finday / takelaka tao anatin'ny roa herinandro voalohany, fiakarana 3% amin'ny fidiram-bola an-tserasera ary fiakarana 140% amin'ny fidiram-bola an-tserasera. Nahavita izany izy ireo tamin'ny alàlan'ny votoatin'ny làlan-kaleha nohatsaraina, sary matanjaka ary fizotran'ny famandrihana notsorina - nanjary fironana nomerika niaraka tamin'ireo mpandeha.
Mba hanatsarana ny dia finday ho an'ny tranokalany, hampitomboana ny fiovam-po ary hanome traikefa marika tsara mifanaraka amin'ny soatoavina lafo vidy maoderina an'ny orinasa, niara-niasa tamin'ny mpamatsy teknolojia traikefa ho an'ny mpanjifa ny Celebrity Cruises SDL ary ny consultant nomerika : Fototra iorenan'ny fanatanterahana.
Ny marika fitsangatsanganana eran-tany dia tsy maintsy manome fahafaham-po ny filan'ny mpandeha sy ny vahiny na mivantana na amin'ny Internet, amin'ny fotoana tena izy ary amin'ny fiteny maro. Midika izany fa fiantohana traikefa tsy misy tohika sy tsy miovaova manerana ny fantsona sy ny fifandraisana. Mba hahatratrarana izany dia tsy maintsy manitsy ny paikadin'izy ireo ny mpivarotra rehefa mivoatra ny fitondran-tenan'ny mpanjifa sy ny safidiny, mitazona ireo fironana fivezivezena nomerika dimy ireo. Paige O'Neill, CMO, SDL
Ny indostrian'ny fizahan-tany izao dia miatrika fanamby tsy manam-paharoa amin'ny fanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpandeha na amin'ny Internet na amin'ny Internet, amin'ny fotoana tena izy ary amin'ny fiteny maro. Mba hahatratrarana sy hihoarana ny fitakian'ny mpandeha dia tsy maintsy mamorona fomba mailaka kokoa ny marika amin'ny alàlan'ny fahatakarana ireo fironana 5 manaraka izay mamolavola ny ho avin'ny traikefa nomerika.
Fironana momba ny dia 5 mamolavola ny ho avin'ny traikefa nomerika
Fanamafisana ara-tsosialy - Tsy miteny intsony ireo mpandeha mangina ary milaza ny ahiahiny amin'ny Internet nefa tsy miteny na iray aza. Mampiasa fitaovana niomerika izy ireo ary tsy mila tanana intsony
Personalization mifototra amin'ny Preferensi - Ireo mpandeha lavitra dia tototry ny safidy amin'ny Internet. Ireo mpivarotra dia tsy maintsy manolotra fampahalalana kendrena sy manokana ho an'ireo mpandeha mampiasa angona ary manangona CX tsara kokoa
Fanatsarana traikefa nomerika - Ny Visual no fiteny vaovao amin'ny vanim-potoana niomerika. Ny mpanjifa dia manome lanja ny hevitry ny hafa mihoatra noho ny resaka marketing rehetra
Fanelingelenana amin'ny finday - Uber sy AirBnB dia ohatry ny mpanelingelina izay niova ho fitaovana fiaraha-miasa.
Fanompoan-tena nomerika - Androany 39% -n'ny Millennial no mitarika ny diany amin'ny alàlan'ny metasearch fa tsy ireo masoivohon'ny fizahan-tany an-tserasera (OTA) na fitetezana tranokala marika araka ny voalazan'ny mpikaroka nomerika. Ny marika fitsangatsanganana dia tsy maintsy mieritreritra mihoatra ny lisitry ny dia ary ny antony ilana fifandraisana eo amin'ny sehatry ny kolontsaina mba hanomezana ny antenain'ny mpandeha eran-tany.
28 Jul 2015 amin'ny 4:55 PM
Salama, lahatsoratra mahafinaritra, misaotra!
inona araka ny hevitrao no zavatra 3 manandanja indrindra amin'ny fampiharana famandrihana fitsangatsanganana vaovao ankehitriny?